I-china eyenziwe ngokwezifiso iphakethe lesidlo sabantu abadala, abahlinzeki, ifektri - i-Quotation - iDongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Isikhwama sasemini Isikhwama sasemini > Iphakethe labadala lokudla kwasemini
Ngezimpelasonto noma ngamaholidi, umndeni ungahamba ngemoto.Kwakuyisikhathi sasemini futhi ngilethe eyami isidlo sasemini.Kunobhakha abakhulu beziphuzo zikabhiya ezibandayo kanye nojosaka abancane bamabhokisi emini.Kuyinto ehlanzekile futhi emnandi futhi iyathandeka njengekhaya.
Isikhwama sabantu abadala sasemini
I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. yasungulwa ngo-2003.Ibhizinisi lethu eliyinhloko ukuklanywa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yobhaka, enjengale: ojosaka be-laptop, izikhwama zesikole zabafundi, izikhwama zesikole, izikhwama ze-diaper, ojosaka bangaphandle, ojosaka bezemidlalo, ama-rucksacks, izikhwama zesikole zekhathuni kanye neminye imikhiqizo. Ngasikhathi sinye, siphinde sandise amanye amabhizinisi, njengokuklanywa komklamo: izikhwama zebhande, izikhwama ze-duffel, izikhwama, izikhwama zamathuluzi, izikhwama zasemini, izikhwama zezibhamu, izikhwama zamasosha, amasaka wesilwane neminye imikhiqizo. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende, sisungule nomnyango ozosiza amakhasimende ukuthi athole ezinye izigaba zezimpahla eChina. E-China, sine-supply chain eqinile futhi evuthiwe engenhla neyaphansi. Lokhu kuyinzuzo yethu eyinhloko eyinhloko. Ngenxa yalolu sizo, singawahlinzeka wonke amakhasimende ethu ngokushesha, kangcono nangcono, futhi sinikeze amakhasimende ethu izinsiza zokwenza ngokwezifiso zomkhiqizo kahle, singaphinde sinikeze ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu yekhwalithi kumakhasimende ayathengiswa. Abasebenzi bethu abangama-600 nemishini yokukhiqiza engama-500 yizimpahla zethu ezinkulu. Sikugcina kanjani isikhundla sethu sokuhola? Sibeka phambili ukuxhumana phakathi kwabantu, futhi sibeka phambili ukuvikela amalungelo abantu abasebenzi kanye nokuvikela amalungelo amakhasimende. Indawo yokusebenzela engamamitha-skwele ayi-18,000 isivumela ukufaka izinto zokukhiqiza eziningi kanye nabasebenzi bokukhiqiza, futhi sinikeze izinsizakalo kumakhasimende kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukukhiqizwa kwesampula, ukukhiqizwa ngobuningi, ukuthuthwa kwempahla, kanye nesimemezelo samasiko. Uma udinga ukwenza ngezifiso imikhiqizo yobhaka noma ukumela umkhiqizo wethu, sicela uxhumane nathi:adamdavis@fofrerbag.com
1. Isikhwama sasemini sabadala - ukudla okwanele kohambo lokuzishayela:
Izici zokufakwa kwephakheji:
2. Amaphuzu abalulekile wokuklama iresiphi yokudla okunempilo kokudla kathathu ngosuku kubantu abadala abajwayelekile
(1) Ukunquma amandla aphelele osuku ngokubheka phezulu etafuleni nokubala, nokwabela amandla aphelele ekudleni kathathu ngosuku ngokuya ngamaphesenti angama-30%, 40% kanye nama-30%.
(2ï¼ ‰ Okwesibili, yabela amandla esidlo ngasinye ezinhlotsheni ezintathu zomsoco wokukhiqiza ngokuya ngesilinganiso samandla we-carbohydrate accounting engama-60%, i-fat accounting ye-25% ne-protein accounting ye-15%.
(3) Hlukanisa amandla ahlinzekwa yisakhi ngasinye somkhiqizo ngomkhiqizo wayo wokukhiqiza ukuthola inani lesakhi ngasinye somkhiqizo.
(4)Hlukanisa inani elibaliwe lama-carbohydrate ngesilinganiso sama-carbohydrate ekudleni okuyisisekelo okukhethiwe ukuthola ikhwalithi edingekayo yokudla okuyisisekelo. (Ngokuqukethwe kwe-carbohydrate kokudla okuyisisekelo, sicela ubheke etafuleni lokwakheka kokudla.)
(5) UTinani lamaprotheni ekukhipheni ukudla okuyisisekelo kanye nenani elilodwa lamaprotheni inani inani lamaprotheni okufanele ukudla okungekho okuyisisekelo okunikeze kona okungukuthi.Ukuhlukahluka nobuningi bokudla okungekho okuyisisekelo kuklanywe ngokufanele.
(6)Imifino yakhelwe ngokuya ngo-400-500g ngosuku; Izithelo zenzelwe ukuba zibe ngu-100-200g ngosuku.
Izidingo zokudla, ukudla kwabantu abadala nsuku zonke okungu-1.0-2.0kg (iningi lika-1.2-1.6kg), ibhulakufesi alikho ngaphezu kuka-400g, cishe ukudla kwasemini okungama-400-800g, isidlo sakusihlwa esingu-400-500g, njengokudla oketshezi, ukudla okungenziwa kunganyuswa ngokufanele .
Izidingo zokuhlaziywa, ukunikezwa kwamandla ngaphezu kuka-90% wezinga kuyinto ejwayelekile; Kuyinto evamile ukungabi namaprotheni angadluli ku-10% ngosuku, futhi isilinganiso samasonto onke samaprotheni esingeqile ku-± 2g ngosuku. ngaphezu kwama-80% wezinga lokuphakelwa kwansuku zonke, futhi inani eliphakathi nesonto alikho ngaphansi kwama-90% wezinga lokuphakelwa kokujwayelekile.I-calcium, uvithamini A, uvithamini B2 kanye nezinye izakhi akufinyeleli ezingeni lika-80% - 90% ukuzama ukwenza.
3. Amapharamitha womkhiqizo wesikhwama sabantu abadala sasemini (incazelo)
Kungaba ukukhiqizwa kwe-OEM
Indwangu ye-300D Oxford + i-5mm pearl cotton + isikhunta esisha sase-European standard aluminium
Umbala ongu-7 ongawukhetha
Imibala ingashintshwa ngesicelo
Ukushisa okuphansi / ukuphrinta kwesikrini / imifekethiso
Ukulondolozwa kokushisa, ukulondolozwa, ukugcinwa
Ukupakisha ibhokisi ngokusho kwamakhasimende
Ubukhulu bungashintshwa ngesicelo
Imidlalo yangaphandle, ezokungcebeleka nezokuvakasha
I-OEM, i-ODM, i-Brand Agency
Enza ngendlela oyifisayo indlela
Isisindo senetha lomkhiqizo
3. Isibonisi sokudubula uqobo sefektri
4. Ukupakisha nokulethwa kwezikhwama zabantu abadala zasemini
(1) Amayunithi wokuthengisa: 1.
(2) Okuzenzakalelayo usayizi nokupakisha olulodwa: 50 * 30 * 30cm, singakwazi ngezifiso usayizi emaphaketheni ngokuvumelana nezidingo zakho, ukuze ugcine wezimpahla ngawe.
(3) Ukupakisha sebhithi: 50CM X 30CM X 30CM. 10PCS / ibhokisi.Izinto zekhartoni: K = K 5 izingqimba zephepha likathayela eliqinile
(4) isisindo esikhulu seFCL: 22KG.
(5) isisindo senetha se-FCL: 20KG.
(6) Imodi yokuhamba: olwandle, emoyeni nasemhlabeni.Sizokhetha indlela yokuhamba enhle kakhulu.
(7) Uma kunesidingo, sizoklama indlela yokupakisha yalesi sikhwama se-baseball ngokuya ngezidingo zakho.
(8) Uma udinga isampula yalesi sikhwama se-baseball, sizokhetha ukukuthumela kuwe ngendiza.
(9) Singaklama indlela yokupakisha yokonga imithwalo eminingi, kepha lokhu kuzodela ezinye izinto, kungadala ukuvela koshintsho lomkhiqizo, ngokuvamile asikhuthazi amakhasimende ukuthi asebenzise le ndlela.
(1) Sizokwenza konke okusemandleni ukusindisa izindleko zakho.
(2) Sizoxhumana njalo amahora angama-24 ngosuku.Sizoxhumana kahle ukuqinisekisa ukuxhumana okuhle kwemininingwane.
(3) Ngemuva kokuthengiswa kwamasampuli. Uma inguqulo yokuqala idinga ukuguqulwa, sizoguqula amasampula ngokuya ngemininingwane yokuguqulwa, futhi yonke inqubo yokukhiqiza inguqulo yesibili yamasampuli ayikhokhelwa ngokuphelele.
(4) Ibhokisi leposi lebhizinisi lethu lisebenza unomphela, futhi ngabasebenzi abangochwepheshe bamakhasimende, ungabhalela ukubonisana nokukhononda nganoma yisiphi isikhathi.Sizofunda futhi siphendule kahle nangokucophelela.
(5) Sizolawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo futhi siyilethe kuwe nge-100% isilinganiso esifanelekile.
(6) Sizokwazisa ngenqubekela phambili yokukhiqizwa kwemikhiqizo yoku-oda ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukuze wazi isimo se-oda ngokushesha okukhulu.
Q1. Kuzokuthatha isikhathi esingakanani ukuxhumana nokuphendula?
Q2: Uyini umthamo wakho wokukhiqiza ngobuningi?
A: (1) Ukukhiqizwa kwethu kwansuku zonke kojosaka abalula kungu-50,000, ukukhiqizwa kwanyanga zonke kuyizigidi eziyi-1.5.
(2) inqubo ukukhiqizwa kobhakha okuyinkimbinkimbi ukwedlula konke ukukhiqizwa kwanyanga zonke okungu-3000, 100,000.
I-Q3: Ingabe unayo i-oda elincane?
A: Yebo, kuya ngezinga lobuciko nobungako bomkhiqizo wakho.
I-Q4: Ingabe uyimboni noma ungumhwebi?
A: Singumkhiqizi wesikhwama eChina, umkhiqizi wesikhwama eChina, hhayi umhwebi.
A: & lt; = 1000USD, 100% yokukhokha kusengaphambili.
> = 1000USD, 30% T / T kusengaphambili, ukulethwa okungu-70% D / P.
Q6. Zingaki izinsuku isikhathi phambili isampula yakho? Ingabe ukunikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma extra?
IMP: (1) Singakunikeza amasampula amahhala kuwe, kepha udinga ukukhokha imali evela eChina iye ezweni lakho.
(2) izinsuku ezingu-7-10 zokusebenza zamasampuli enziwe ngokwezifiso namahora angama-48 amasampula amabala.
I-Q7: Awufuni ukwakheka kwethu komkhiqizo, ungakwenza ngokuya ngomdwebo wami wokuklama?
A: Yebo, singakhiqiza ngokusho komklamo wakho wokudweba.
Q8: Siyini isikhathi sakho sokuhola ekukhiqizweni ngobuningi ezinsukwini?
Impendulo: Umjikelezo wokukhiqiza wemikhiqizo engu-500-1000 yizinsuku ezingama-30-35.
Umjikelezo wokukhiqiza wemikhiqizo eyi-1000-3000 yizinsuku ezingama-35-40.
Umjikelezo wokukhiqiza wemikhiqizo engu-3000-5000 yizinsuku ezingama-40-45.
Umjikelezo wokukhiqiza wemikhiqizo engu-5000-10000 yizinsuku ezingama-45-50.
Umjikelezo wokukhiqiza ongenhla uzolungiswa ngokuya ngezinga lobuchwepheshe bokukhiqiza kanye nobunzima bemikhiqizo eyenziwe ngezifiso.Izithombe ezinikezwe noma amasampula kufanele ahlolwe ukuthola umjikelezo wokukhiqiza ngqo.
Q9: Hlobo luni lesilinganiso semali oyikhokhayo oyamukelayoIzinsuku ezingaki isikhathi sokukhokhwa?
Impendulo: (1) ukudubula ikhotheshini yokudweba yomkhiqizo, ikhotheshini ngokuya ngomklamo womkhiqizo, okushiwo isampula enikeziwe.
(2) Isikhathi sokucaphuna somkhiqizo owodwa ngamahora angu-12, kanti isikhathi sokukhishwa kwe-batch yizinsuku ezingu-2-3.
(3) Ikhotheshini mode: ex-ifektri intengo, FOB, CIF.
(4) Uma udinga ikhotheshini, sicela uqaphele indlela yekhotheshini, engasisiza ukuthi sikunikeze kangcono.
Q10. Zingaki izinsuku isikhathi phambili isampula yakho? Ingabe ukunikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma extra?
Q11: Ingabe uyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu? Ungahlinzeka ngombiko wokuhlolwa komkhiqizo? Kuthiwani ngekhwalithi yokukhiqizwa kwakho?
IMP: (1) Yebo, siyakwamukela ukuhlolwa komuntu ovela eceleni.
(2) Inganikeza umbiko wokuhlolwa komkhiqizo.
(3) Singumkhiqizi womkhiqizo wama-Disney baseball ojosaka, izikhwama ze-Wal-Mart kanye ne-Samsonite. Sicela uqiniseke ngekhwalithi yemikhiqizo yethu.
I-Q12: Uke wayithumela imikhiqizo e-Amazon ngaphambilini?
A: Yebo, sinesitolo sethu se-Amazon.
Q13: Likuphi itheku eliseduze?
A: Sizinze eDongguan, ngakho-ke imvamisa itheku lethu liseShenzhen noma eHong Kong.
I-Q14: Ingabe ukhona umehluko wombala noma u-1cm umehluko phakathi kwesithombe nento yangempela ngokombala nosayizi?
A: Umbala wangempela womkhiqizo ungahluka kancane kumbala okhonjiswe esithombeni ngenxa yokubonisa okuhlukile nemiphumela yokukhanyisa.Ngenxa yesilinganiso semanuwali, sicela uvumele ukuphambuka kwesilinganiso esingu-1-2cm.Siyabonga kakhulu!
Amathegi ashisayo: Iphakethe lesidlo sabantu abadala, iChina, abenzi, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, intengo, ikhotheshini, kusitoko
Izikhwama zasemini zabesifazane
Izikhwama zasemini ezifakiwe
Isikhwama sasemini sezingane
Isikhwama esipholile sasemini